हाम्रो प्यारो कालेबुङ
निर्देशाङ्कहरू: २७°०४′N ८८°२८′E﻿ / ﻿२७.०६°N ८८.४७°E﻿ / 27.06; 88.47 कालिम्पोङ उर्फ कालेबुङ जिल्ला पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित सहर हो। कालिम्पोङ १७०० ई. सम्म सिक्किमको एक भाग थियो। १८ औँ शताब्दीको सुरुमा भुटानका राजाले यसमा कब्‍जा गरेका थिए। आंग्ल भुटान युद्ध पछि १८८५ ई. मा यसलाई दार्जिलिङमा मिलाईएको थियो। १९ औँ शताब्‍दीको उत्तरार्द्धमा यहाँ स्‍काटिश मिशनरीहरूको आगमन भयो। १९५० ई. सम्म यो सहर ऊनको प्रमुख व्‍यापारिक केन्द्र थियो। वर्तमानमा यो सहर पश्चिम बङ्गालको प्रमुख हिल स्‍टेशन हो।
थोंगशा गोंपा कालिम्पोङमा स्थित सबै गुम्बाहरूमा सबैभन्दा पुरानो हो । यसलाई भुटानी गुम्बाका नामले जानिन्छ। यस गुम्बाको स्‍थापना १६६२ ई.मा भएको थियो। यस गुम्बाको मूल संरचना अंग्रेजहरूको यहाँ आगमनभन्दा पहिला आन्तरिक झगडेमा नष्‍ट भएको थियो। जोंग डोग पालरी फो ब्रांग गोंपा गुम्बालाई दलाई लामाले १९७६ ई.मा आम जनतालाई समर्पित गरे। यो गुम्बा दूरपीन डाँडा चुचुरोमा स्थित छ। यस गुम्बामा बौद्धहरूको प्रसिद्ध ग्रन्थ कंग्‍यूर' राखिएको छ । १०८ भागहरू भएको यस ग्रन्थ लाई दलाई लामा ले तिब्‍बतबाट आफ्नो साथ लिएर आएका थिए । यस गुम्बाका प्रार्थना कक्षको देवलहरूमा धेरै नैं सुन्दर चित्रकारी गरिएको छ। यस गुम्बाको माथिल्लो तलामा त्रिआयामी मण्डला छ। यस गुम्बाको नजिकै थारपा चोइलिंग गोंपा गुम्बा छ। यो गुम्बा तिब्‍बतियन बौद्ध धर्मका जेलूपा सम्प्रदायसंग सम्बन्धित‍ छ।
कालिम्पोङमा अहिले पनि धेरै औपनिवेशिक भवन छ। यी भवनहरूमा मुख्‍यत: बंगला तथा पुरानो होटल सामेल छन्। बेलायती ऊनी व्‍यापारिहरू द्वारा बनाइए यी भवन मुख्‍य रूपबाट रिंगकिंगपहरूग तथा हिल टॉप रोडमा स्थित छ। यी भवनहरूमा मोरगन हाउस, क्राकटी, गलिङ्का, साइदिंग तथा रिंगकिंग फॉर्म सामेल छन। मोरगन हाउस तथा साइदिंगलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पर्यटक आवासका रूपमा परिवर्तन गरिदिएकोछ। यी भवनहरूका नजदीक नैं सेन्ट टेरेसा चर्च छ। यस चर्चलाई स्‍थानीय कारीगरहरूले प्रसिद्ध गोंपा गुम्बाको अनुकृतिमा बनाएका छन।
रेशम उत्‍पादन अनुसन्धान केन्द्रसम्पादन
यो कालिम्पोङदेखि ३४ किलोमीटर टाडा छ। यो ठाउँ कालिम्पोङदेखि भूटानका पुरानो व्यापारिक मार्गमा अवस्थित छ। यो स्‍थान चारै तर्फ बाक्लो शंकुधारी वनले घेरिएको छ। यहाँ भुटानी शैलीमा बनेको एक धेरै सुन्दर गुम्बा तथा नेचर इंटरप्रेटेशन सेन्टर केन्द्र छ। यहाँबाट नैं न्‍यौरा राष्ट्रिय निकुञ्ज जाने बाटो छ। ज्ञातव्‍य होस कि न्‍यौरा १०३४१ फीटको उचाईमा रशे भन्ज्याङमा स्थित छ। रशे भन्ज्याङ भुटान, सिक्किम तथा पश्चिम बङ्गालको सीमा छ। यहाँदेखि चोला श्रेणीको धेरै नै राम्रो दृष्य देखि्दछ। लोलीगाउँ जसलाई खापर पनि भनिन्छ लावादेखि २५ किलोमीटरको दूरीमा स्थित छ। यहाँदेखि हिउँबारीको धेरै सुन्दर दृष्य देखि्दछ।
विकियात्रामा Kalimpong सम्बन्धित यात्रा वृतान्त उपलब्ध छ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=कालिम्पोङ&oldid=1059774" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १० फेब्रुअरी २०२२, ०१:३२
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०१:३२, १० फेब्रुअरी २०२२ मा परिवर्तन गरिएको थियो।